Imboni Yezindaba Yezimboni, Abahlinzeki | Abakhiqizi bezindaba baseChina China
Isikhathi sokuthumela: 08-06-2020
Iyini inyama esekwe ezitshalweni? Inyama esekwe ezitshalweni inyama eyenziwe ezitshalweni. Yakhelwe ngokukhethekile futhi yenzelwe ukubukeka, ukunambitha okunje, futhi ukupheka njengenyama yanyama. Inyama esekwe ezitshalweni ingaba ngesimo se-burger patty, nugget, noma ivele idilike futhi amasoseji futhi njengoba ikhula ithandwa kakhulu, lezi v ...Funda kabanzi »
IHydroxyproply Methyl Cellulose yokwakhiwa
Isikhathi sokuthumela: 07-13-2020
I-Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC; CAS No. 9004-65-3) iyi-odorless futhi enganambitheki, emhlophe qwa, imhlophe qhwa, imicu eluhlaza okwesibhakabhaka noma egobolondayo, egeleza mahhala eyenziwe eyenziwe nge-polymer cellulose yemvelo. Kungachithwa emanzini abandayo ukuze kwenziwe isisombululo esibonakalayo se-viscous. I-Hydroxypropyl Methyl Cellulos ...Funda kabanzi »
Umehluko phakathi kukaCement Plaster noGypsum Plaster
Isikhathi sokuthumela: 06-10-2020
ngu-Civil lead Cement usimende wenziwa ngusimende wePortland nosimende namanzi. kanti esimweni se-gypsum plaster esikhundleni sePortland, i-gypsum yesimende iyasetshenziswa futhi ayidingi isihlabathi. I-Gypsum iyinto engasindi ebunjiwe eyenziwe ngenxa yokuhanjiswa kwamanzi wasolwandle kumabhishi ase-Massive prehistoric ....Funda kabanzi »
IHydroxypropyl Methyl Cellulose ye-San Sanizer yesandla
Isikhathi sokuthumela: 05-07-2020
I-Sanitizing gel uhlobo lwe-hydrogel yotshwala enokuqukethwe okuphezulu kotshwala. Ukuqamba kusetshenziswa i-polymer njenge-ejenti yokuqina ukukhulisa ukubukeka. I-Hydroxypropyl Methyl Cellulose HPMC Ethembekile ingasetshenziswa njengesixhumi sokuqina se-sanitizer yesandla ngenxa yokuqina kwayo kuma-soltiv organic kanye ne -sociib ...Funda kabanzi »
Uyini Umehluko phakathi kweFirer, Thinset, neGrout?
Isikhathi sokuthumela: 04-22-2020
Uyini Umehluko phakathi kweFirer, Thinset, neGrout? Ngu-Marilyn K. Ngaphambi kokuthi uhambe uyothenga izinto, qiniseka ukuthi uyawuqonda umehluko phakathi kokhonkolo, i-thinset, ne-grout. Le mikhiqizo ingahle ibonakale ifana; noma kunjalo, kubalulekile ukuqonda umehluko, ngakho-ke lungiselela futhi us ...Funda kabanzi »
I-Hydroxypropyl Methyl Cellulose HPMC yokuhlanzisisa uketshezi
Isikhathi sokuthumela: 04-08-2020
I-Hydroxypropyl Methyl Cellulose HPMC imhlophe noma iphuzi eliphuzi elinephunga, alinambitheki futhi alinobuthi.Line-hygroscopicity ephezulu futhi lincibilika emanzini ukuze lenze uketshezi oluningi. Inokuqina okuhle kokushisa, ukumelana nosawoti nokwakha ifilimu. I-HPMC isetshenziswa kabanzi kumkhiqizo ...Funda kabanzi »
Ungayifaka Kanjani i-Floor Tile
Isikhathi sokuthumela: 03-03-2020
NGUJUAN RODRIGUEZ Ungahle ucabange ukuthi leyo floor floor ukufaka umsebenzi ibukeka ilula impela - ilula ngokwanele ukuthi ungathanda ukuyenza ngokwakho. Noma unolwazi oluncane lokwenza lolu hlobo lomsebenzi, ungaba okuthile kwesifaki sochwepheshe, noma okungenani ufunde ukuthi unga ...Funda kabanzi »
I-Sodium carboxymethyl cellulose yokusebenzisa okokuhlanza uketshezi
Isikhathi sokuthumela: 02-19-2020
I-Sodium Carboxymethyl Cellulose （CMC） ingumbala omhlophe noma ophuzi ophundu, awunambitheki futhi awunawo ubuthi.Une-hygroscopicity ephezulu futhi i-soluble emanzini ukuze yakhe uketshezi oluningi. Inokuqina okuhle kokushisa, ukumelana nosawoti nokwakha ifilimu. I-Sodium Carboxymethyl Cellulose （CMC） ...Funda kabanzi »
Ukudla Kwebanga le-Carboxymethyl cellulose Sodium
Isikhathi sokuthumela: 01-09-2020
CAS# 9004-32-4 Carboxymethyl cellulose (CMC) or cellulose gum is a cellulose derivative with carboxymethyl groups (CH2-COOH). CMC is used in food under the E number E466 or E469 (when it is enzymatically hydrolyzed) in various products with a common dosage of 0.2%-0.5%. Carboxymethyl cellulose ...Funda kabanzi »
I-cellulose ether yokunamathisela iphepha lokunamathisela odongeni
Isikhathi sokuthumela: 12-13-2019
Umkhiqizo wethu we-cellulose ether usetshenziswa njenge-adhesive eyinhloko yokunamathela kwephepha lodonga. Unguphunga futhi awunambitha, mhlophe kuya komoya omhlophe omncane owenziwe nge-polymer cellulose. Ingasetshenziswa kalula nge-brashi noma ngomshini wokunameka. Inika umsebenzi omanzi odingekayo ukubamba okuhlukahlukene ...Funda kabanzi »
I-Hydroxyethyl Cellulose yezokupenda nokuboza
Isikhathi sokuthumela: 08-20-2019
IHydroxyethyl Cellulose (HEC) iyi-polymer engamanzi engeyona i-ionic etholakala ngochungechunge lwezinqubo zamakhemikhali ezivela kukotini linter (noma uganda lwamapulangwe). IHydroxyethyl Cellulose (HEC) kade isetshenziswa njenge-rheology modifier, ukugcinwa kwamanzi nokuqiniswa kwamapende we-latex. IHydroxyethyl Cellulose (...Funda kabanzi »
Ukusetshenziswa kwe-Hydroxyproply Methyl Cellulose ekwakheni
Isikhathi sokuthumela: 07-25-2019
Ukusetshenziswa kwe-Hydroxypropyl Methyl cellulose （HPMC） ekudleni
Isikhathi sokuthumela: 07-04-2019
IHydroxypropyl Methyl cellulose （HPMC） ingasetjenziswa njengendawo yokudla kokudla ku: • Iziphuzo zobisi ezisebenzayo, isiphuzo seyogathi I-HPMC） ekuphuzeni kwe-asidi ...Funda kabanzi »
Igayidi Yokukhetha I-Tile Adhesive Eqondile
Isikhathi sokuthumela: 01-21-2019
Ukhiphe amathayili akho afanele? Woohoo! Kepha ungahlali emuva njengamanje - engcupheni yokuzwakala njenge-pooper yephathi, lokho kujabulisa okuhle okwenziwe. Manje sekumele sicabange ngama-ancess kanye nokufakwa. Ngemuva kwakho konke, amathayili akho amasha azobukeka engcono kakhulu uma efakwe kahle. Sisebenzisa i-tile adhe ...Funda kabanzi »
Izicelo ze-Hydroxypropyl Methyl Cellulose ku-Tile Adhesives
Isikhathi sokuthumela: 01-02-2019
I-Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC; CAS No. 9004-65-3) iyi-odorless futhi enganambitheki, emhlophe qwa, imhlophe qhwa, imicu eluhlaza okwesibhakabhaka noma egobolondayo, egeleza mahhala eyenziwe eyenziwe nge-polymer cellulose yemvelo. Kungachithwa emanzini abandayo ukuze kwenziwe isisombululo esibonakalayo se-viscous. I-Hydroxypropyl Methyl ...Funda kabanzi »
Ukusetshenziswa kwe-Hydroxyethyl Cellulose ku-Latex Paints
Isikhathi sokuthumela: 12-26-2018
Amaphilisi we-HPMC angenalutho
Isikhathi sokuthumela: 11-26-2018
Ama-capsule we-HPMC angenalutho noma ama-Capsule yemifino atholakala kusuka emvelweni wemvelo cellulose- Hydroxypropyl methyl cellulose. Aqukethe aqukethe, i-gelatin, ukolweni, i-gluten, imikhiqizo yezilwane noma isitashi. Banobungane nabathengi bemifino. Izinzuzo zama-Capsules Vegetarian Capsules Umswakama ophansi wokuqukethwe Vege ...Funda kabanzi »
IHydroxyethyl Cellulose (HEC) Ye-Amafutha Ukushayela
Isikhathi sokuthumela: 11-12-2018
Hydroxyethyl Cellulose (HEC) is a non-ionic water soluble polymer obtained through a series of chemical processes from cotton linter (or wooden pulp). Hydroxyethyl cellulose is widely used as a thickener and loss control agent in oil drilling. In oil drilling industry, high-viscosity HEC is mai...Funda kabanzi »
Ukusetshenziswa kwe-HPMC Ukulungiselela Amakhemikhali
Isikhathi sokuthumela: 10-09-2018
I-Hydroxypropyl methyl cellulose (HPMC; CAS No. 9004-65-3) iyi-odorless futhi enganambitheki, emhlophe qwa, imhlophe qhwa, imicu eluhlaza okwesibhakabhaka noma egobolondekile, ukuguqulwa okwenziwe nge-polymer yemvelo, i-cellulose. IHydroxypropyl methyl cellulose iye yaba ngomunye wabasokhemisi abakhulu ...Funda kabanzi »
IHydroxyethylcellulose (HEC) yemikhiqizo yokunakekelwa komuntu siqu
Isikhathi sokuthumela: 09-17-2018
IHydroxyethylcellulose (HEC) iyi-ejenti enhle kakhulu yokunakekelwa komuntu siqu. Ishintsha izakhiwo zokugeleza kwamanzi ezingakuzuzisa imikhiqizo eminingi yokunakekelwa komuntu okuvumela ukuthi udale amaserry acwebile, okhilimu kanye nama-lotion athuthukisiwe, kanye nezinhlelo zokuhlanza ezithuthukisiwe. I-Hydroxyethylce ...Funda kabanzi »
Isikhathi sokuthumela: 09-14-2018
Isikhathi sokuthumela: 09-12-2018